कलाकार निशा घिमिरेको नि’धन’मा सेलिब्रेटीको उपस्थिती नहुदा कलाकारको आ’क्रो’श, एसरी भयो अन्त्येष्टि ( भिडियो):: Mero Desh
कलाकार निशा घिमिरेको नि’धन’मा सेलिब्रेटीको उपस्थिती नहुदा कलाकारको आ’क्रो’श, एसरी भयो अन्त्येष्टि ( भिडियो)
Published on: १७ भाद्र २०७८, बिहीबार १०:१५
कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको नर्भिक हस्पिटलमा उपचारको क्रममा नि’ध’न भएको हो। उनको नि’ध’नपछी पशुपती आ’र्याघाटमा आफ्नो परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको अन्त्येष्टिमा कुनैपनी सेलिब्रेटिको उपस्तिथि नहुदा कलाकारले गुनासो गर्दै आ’क्रोश पनि पोखेका छन्।
अन्य समयमा सेलुब्रेटिको भिड देखिन्छ भने आज निशाको नि’ध’न हुदा कुनै पनि सेलिब्रेटी देखिदैनन्। भोज खाना ताँती लागेर जाने सेलिब्रेटिहरु दु: खदको घडिमा उपस्तिथि नहुदा दुख लागेको बताउछन कलाकारहरु। निशा पनि एउटा उदाउदै गरेको कलाकार थिईन
एउटा कलाकारको दु:खद नि’ध’नमा अन्य कलाकार नजानु कहाँ सम्मको कु रा हो? मुखले धेरै सेलिब्रेटिले सहयोग गर्छु भने पनि उनलाइ सहयोग भने नगरेको बताउ छन कलाकारहरु। निशा घिमिरे बचा उ अभियानमा धेर थोर कति रकम जुटेको छ त्यो सबै रकम निशाको बाबू आमालाई दिनु होला भन्दै आग्रह समेत गरे ।पूरा समाचार तलको भिडियो हेर्नुहोस्!!